सरकारी अस्पतालमा अनलाइनबाट ओपिडी टिकट – Nepal Press
#सार्वजनिक खरिद ऐन
२०७८ वैशाख ४ गते १०:२२
काठमाडौं । सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा झन्झट ब्यहोर्नुपर्ने गुनासो आइरहेको समयमा यहाँको अस्पतालले अनलाइनबाटै ओपिडी टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाएको छ । टिकट लिन लामो समय पालो कुर्नुपर्ने झन्झटबाट छुटकारा दिन बकुलहर-रत्ननगर अस्पतालले अनलाइन टिकट शुरु गरेको हो ।
स्पतालको सेवामा विविधिकरण गर्ने क्रममा शुक्रबारदेखि अनलाइनबाट टिकट लिन सक्ने सुविधा थप गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख तथा अस्पताल व्यवस्थापन विकास समितिका अध्यक्ष नारायण वनले एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच अनलाइनबाट टिकट लिन सक्ने प्रणालीको उद्घाटन गरे।
सो अवसरमा उनले अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने क्रममा बिरामीको चापलाई मध्यनजर गरी अनलाइनबाट टिकट काट्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।’ उनले अगाडि भने, ‘हामी अस्पताललाई सबै किसिमले अब्बल बनाउँदै छौँ ।’
प्रकाशित: २०७८ वैशाख ४ गते १०:२२
माछा-मासुबिना पनि जम्छ दसैं ! यी हुन् स्वादिष्ट १० शाकाहारी व्यञ्जन
कोरोनासँग जोगिएर कसरी मनाउने दसैँ ? विज्ञ् भन्छन्- आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन